Ashin Pyinna Nanda, For Buddha or For Army …? | MOEMAKA (stop) PRESS !!!
← Chinese Hackers stole GMail Passwords from US Government
after3days trip to Burma, McCain rushed to the computer to use twitter →
Ashin Pyinna Nanda, For Buddha or For Army …?
ဘုရားသာသနာလား … စစ်တပ်သာသနာလား …
ဇွန် ၃၊ ၂၀၁၁
အရှင်ဘုရား အရှင်ဘုရားတို့ ကူညီထားတဲ့ သီလရှင်ကို စက်ချုပ်သင်တန်းက လက်မခံတော့ဘူးတဲ့ဘုရား။ အထက်ပါ စကားကို အမော တကော လျှောက်ထားသူကတော့ သံဃာတော်တွေနဲ့ သီလရှင်တွေကိုထောင်ဝင်စာတွေ့နေသူ ၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ ပြည်သူ့ဂုဏ်ရည်ဆု ရှင် ဒေါ်ရှုပါ။ ဘယ်လိုများဖြစ် လို့ပါလိမ့်လို့ဆက်မေးကြည့်တော့ …။
”မှန်ပါ … စက်ချုပ်သင်တန်းကို တပည့်တော်ကိုယ်တိုင်လိုက်အပ်ပေးတာလေ … အဲဒါ ဒီနေ့တပည့်တော်ပုံ ကိုဂြိုဟ်တုစေ လာင်းကနေေ တွ့လို့တဲ့။ တပည့်တော်အပ်တာဆို လက်မခံရဲတော့ဘူးဆိုပြီး ပိုင်ရှင်ကနှင်ထုတ်လိုက်တာပါဘုရား” ဟု ပြန်လျောက်၏။ ”အော် ဖြစ် မှဖြစ်ရပလေ” ဟုသာ ညည်းးမိပါတော့တယ်။
အပြည့်အစုံနားလည်အောင်ပြန်ပြောရရင်တော့ အဖြစ်ကဒီလိုပါ။ ၂၀၀၇ စက်တင်ဘာအရေးအခင်းဖြစ်တော့ အနယ်နယ်အရပ်ရပ်က ဘုန်းကြီးကျောင်း တွေကို စစ်တပ်က၀ိုင်းဖမ်းလို့ ရဟန်းသံဃာတော်တွေ သီလရှင်တွေ အမြောက်အများအဖမ်းခံခဲ့ရပါတယ်။ အဲဒီအဖမ်းခံရတဲ့အထဲက မြောက်ဥက္က လာပမြို့နယ် သစ္စာသရဖူကျောင်းလည်း တကျောင်းအပါအ၀င် ပါ။ ကျောင်းထိုင်ဆရာတော်အပါ အ၀င် သံဃာ (၇) ပါးနဲ့ သီလရှင်(၇) ပါး ပါ အဖမ်းခံခဲ့ရ တယ်။ အချို့ဆရာတော်ကြီးတွေနဲ့ သီလရှင်ကြီးတွေက သက်တော် (၇၀) ကျော် (၈၀) နီးပါးအရွယ်တွေပါ။ ဆရာတော်ကြီးတပါးနဲ့ သီလရှင်ကြီး နှစ်ပါးက လေဖြတ်ခံထားရသူတွေ။ အဲဒီတုန်းက အဖမ်းခံခဲ့ရပုံကို ဆရာလေး မ၀ိစိတ္တက ဒီလိုပြန်ပြောပြခဲ့ပါတယ်။
”ညအချိန်မတော်ကြီးဘုရား စစ်တပ်က၀ိုင်းပြီးဖမ်းတာဘုရား … တပည့်တော်တို့ကျောင်းက ဆရာတော်ကြီးအပါအ၀င် သံဃာ (၇) ပါးနဲ့ သီလရှင် (၇) ပါး အဖမ်းခံခဲ့ရပါတယ်ဘုရား။ တပည့်တော်တို့ကို အကြိမ်ကြိမ်ရုံးထုတ်စစ်ဆေးပြီး ပုဒ်မ (၂၉၅) (က) ပုဒ်မ (၂၉၂) တို့နဲ့ ထောင်ဒဏ် (၄) နှစ်နဲ့ (၃) လအသီးသီးချမှတ်ခံခဲ့ရပါတယ်ဘုရား” ဟု ၀မ်းနည်းကြေ ကွဲစွာ တုန်တုန်ရီရီဖြင့် လျှောက်ထားပါတယ်။
”ထောင်တွင်းအတွေ့အကြုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လဲ အစားအသောက်ကိစ္စတွေ ကျန်းမာရေးကိစ္စတွေကတော့ အများ သိပြီးဖြစ်လို့ ထပ်မလျောက်ချင် တော့ပါဘုရား။ တပည့်တော်စိတ်မကောင်းအဖြစ်ရဆုံးကတော့ တပည့်တော် အမေ အိုကြီးေ ထာင် တွင်းမှာအရိုက် ခံရတာကို မျက်စေ့ထဲက မထွက်ဘူး ဘုရား” ဟုပြောရင်း ငိုချင်းချပါလေတော့တယ်။
တမိနစ်ခန့်ကြာမှ အသံကိုထိမ်းပြီး ”တပည့်တော်အမေအို သီလရှင်ကြီးက အသက် (၆၀) ကျော် (ရ၀) နီးပါးဖြစ်နေပြီ။ နဂိုကတည်းက စိတ်က သိပ်မ မှန်တော့ဘူးဘုရား။ အသက်ကလဲကြီး အနေအထိုင်အစားအသောက်ကလဲဆင်းရဲတော့ စကားများတာ ပေါ့ဘုရား …။ အဲဒါကိုထောင်ဝန်ထမ်းတွေက ဆူတယ် ညံတယ် အေးအေးမနေဘူးဆိုပြီး အမေအိုကြီးကို လက်သီးနဲ့ထိုးတာ သွားနှစ်ချောင်းကျိုးသွား တယ်ဘုရား …။ နောက်ဘယ်နေရာတွေ ဘာဖြစ်ကုန်လဲမသိဘူးဘုရား … တော်တော်နဲ့သတိမရဘူး။ အတော်လေးခံလိုက်ရတယ်။ ကိုယ့်အမေအိုကြီးကို ကိုယ့်ရှေ့ မှာထောင်ဝန်ထမ်းက လက် သီးနဲ့ထိုး ခြေထောက်နဲ့ကန်လုပ်နေတာကို တပည့်တော် ဘာမှမပြောနိုင် မကယ်နိုင်နဲ့ ဘယ်လောက်ခံစားရ မယ်ဆိုတာ အရှင်ဘုရား စဉ်းစားကြည့်ပါ ဘုရား” ဟု ၀မ်းနည်းကြေကွဲစွာပြန်ပြောပြရှာပါတယ်။
”အတော်လေး ကိုယ်ချင်းစာတရားခေါင်းပါးတဲ့ ထောင်ဝန်ထမ်းပါတကား” ဟု သက်ပြင်းအခါခါချမိပါတော့တယ်။
”အဖမ်းခံခဲ့ရတာနဲ့ပက်သက်ပြီးတော့ လည်း တပည့်တော် တကယ်ခံစားရတယ်ဘုရား ဖြစ်ပျက်သွားတာတွေကို အစကနေအဆုံးအထိ မမေ့ဘူး ဘုရား…။ တပည့်တော်ရဲ့ဘ၀မှာ ဒါမျိုးဖြစ်လိမ့်မယ်လို့လဲ တခါမှထင်မထား ဘူးဘုရား။ တပည့်တော်တို့ကို အပြစ်မရှိဘဲ အပြစ်ရှာပြီးဖမ်းလို့ (၄) နှစ် ကျော်ထောင်ထဲမှာနေခဲ့ရတယ်။ နာနာကျင်ကျင်ကြီး ကိုခံစားရပါတယ်ဘုရား …။ အတတ်နိုင်ဆုံးတ ရားနဲ့ ဖြေပါတယ်ဘုရား…။ ကလဲ့စားချေလိုစိတ်လဲ မရှိပါဘူးဘုရား” ဟု နာကျည်းသံတ၀က် တရားသံလေးတ၀က် စွက်ပြီးဖြေကြား ပါတယ်။
”တပည့်တော်တို့ (….) နေ့က သီရှင်လေးပါးလုံး ထောင်ကလွတ်မြောက်လာခဲ့ပါတယ်။ ထောင်ကထွက်လာတော့ အရင်နေခဲ့တဲ့ကျောင်း ကိုပြန်ပါတယ် တပည့်တော်တို့သီလရှင်တွေမရောက်ခင် အာဏာပိုင်တွေက အရင်ကြိုရောက်နေပြီး ဒီကျောင်းမှာပြန်နေလို့မရတဲ့ အကြောင်း သီလရှင်ဝတ်ခွင့်မပြုနိုင် ကြောင်းပြောပြီး သီလရှင်တွေကိုမောင်းထုတ်ခဲ့တာ ပါ။ ထောင်ကထွက်ခါစ ကျန်းမာရေးကလည်း မကောင်း နေစရာစားစရာမရှိ ဘယ်သွားရမှန်းမသိနဲ့ တပည့်တော်တို့ သီလရှင်တွေလမ်းပေါ်မှာ ယောင်ချာချာဖြစ်နေခဲ့ တာပါ။ နောက်ဆုံးတပည့်တော် တို့သတိရလိုက်တာကတော့ အမှုရင်ဆိုင် တုန်းက တရားရုံးကိုလာပြီး ဆွမ်းကပ်သူ အ၀တ်အ စား ဆေးဝါးပေးသူ ထောင်တွင်းကို ထောင်ဝင်စာပို့ ပေးနေသူေ ဒ်ါရှုကိုပါ။ ဒေါ်ရှုက သီလရှင်တွေရဲ့အခက် အခဲကိုဖြေရှင်းပေးလိုက်လို့ အထိုက်အလျောက်အဆင်ပြေသွားပါတယ်။ လွတ်လာတဲ့သီလရှင်လေးပါးထဲမှာ သီလရှင်အိုကြီးနှစ်ပါးကတော့ သူတို့ရဲ့ အမျိုးတွေကတာဝန်ယူသွားလို့ အဆင်ပြေ သွားပါတယ်။ တပည့်တော်တို့သားအမိကတော့ ဦးလေးဖြစ်သူအိမ်မှာ ကပ်ရပ်ပြီးနေထိုင် ခဲ့ကြပါတယ်။ ဦး လေးဖြစ်သူက အကြော်ရောင်းကျွေပြီး စောင့်ရှောက်ခဲ့တာပါ။ အတောာ်လေးဆင်းရဲ တယ်ပါတယ်ဘုရား” ဟု ကြောင့်ေ ကြာင့်ကြကြ ပူပူပင်ပင် ဆိုရှာပါတယ်။
သီလရှင်လဲပြန်ဝတ်လို့လဲမရတော့ ဆရာလေးမ၀ိစိက္တကို အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမှု့အတွက် ဒေါ်ရှုက စက်ချုပ်သင်တန်း အပ်ပေးခဲ့ေ ပမယ့် စက်ချုပ်ရုံ သင်တန်းပိုင်ရှင်က အထက်ကပြောခဲ့သလို အကြောက်လွန်ပြီး ခုလိုလက်မခံရဲတော့ဘူးဆို တဲ့အခြေအနေတွေဖြစ်လာ တာပါ။စာရေးသူလဲ မည်ကဲ့သို့ ပြု လုပ်ပေးရမည်မသိဖြစ်သွားရပါတယ်။ တခုခုတော့ အဆင်ြေ ပေ အာင် စီစဉ်ပေးရအုံးမယ်ထင်ပါရဲ့။
ထောင်ထွက်တွေရဲ့ဘ၀တွေက အင်မတန်ဝမ်းနည်းကြေကွဲစရာတွေပါ။ ဆွေမျိုးသားချင်းတွေကအစ အာဏာပိုင်တွေက ဒုက္ခပေးမှာကြောက်လို့သူတို့ အိမ်ကိုထောင်ထွက်တွေလာမှာကို စိုးရိမ်ကြတယ်။ ခုတော့ သူတို့ဘာဆက်လုပ်ရ မှန်းမသိနဲ့ စိတ်ဆင်းရဲစွာ ဘ၀ကိုရင်ဆိုင်နေကြရပါတယ်။ သူတို့လို ဘဲထောင်ကထွက်လာတဲ့သံဃာတော်တွေလဲ ဒီလိုအဖြစ်ဆိုးေ တွနဲ့ ကြုံခဲ့ကြရတာပါ။ ယခုနယ်စပ်တနေရာကိုရောက်နေတဲ့ မိမိအသိ ဆရာတော်နှစ်ပါး ဆိုရင် ထောင်ထဲမှာ (၁၆) နှစ်နေခဲ့ကြရပြီး ထောင်ကထွက်လာတဲ့အခါ လက်ရှိကျောင်းထိုင်ဆရာတော်ကိုယ်တိုင်က သိပ်ပြီးလက်မခံချင်တဲ့ အတွက် အာဏာပိုင်တွေကို သူတို့ကိုယ်တိုင် ကျောင်း ကိုဘယ်နိုင် ငံရေးသမားတွေလာတယ် … ဘယ်သွားတယ် … ဘယ်လာတယ် … စသည်ဖြင့် သတင်းတွေ ပေးေ နလို့ ဆက်မနေရဲတော့ဘဲ ဇာတိရွာတွေကိုပြန်သွားခဲ့ ရပါ တယ်။ ရောက်တဲ့နေရာမှာ အာဏာပိုင်တွေက ထောင်ထွက်ဘုန်းကြီးတွေကို လက်ခံထား တဲ့ဘုန်းကြီးကျောင်းနဲ့ ကူညီနေသူတွေကို မကူညီရဲအောင် နည်းမျိုးစုံနဲ့ခြိမ်းခြောက်ပါတယ်။ ထောင်ထွက်ဘုန်းကြီးေ တွကိုလဲ နေလို့မ ရအောင် အနှောင့် အယှက်ပေးတဲ့အတွက် ပြည်တွင်းမှာဆက်မနေရဲတော့ဘဲ ထိုင်းနိုင်ငံ လွတ်မြောက်နယ်မြေတနေရာကို ထွက်ခွာ လာခဲ့ရပါတော့တယ်။
အဲဒီထက် ပိုပြီးဆိုးတဲ့အဖြစ်အပျက်တခုလဲရှိပါသေးတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ြေ ခာက်လလောက်က ထောင်ကထွက်လာ တဲ့ ဘုန်းကြီးအိုကြီး တပါးရဲ့အဖြစ်မှန်ပါ။ ထောင်ကထွက်လာတော့ အရင်နေခဲ့တဲ့ကျောင်းကလဲ လက်မခံ၊ အခြားကျောင်းေ တွကလဲ အာဏာပိုင်ကိုကြောက်လို့ လက်မခံရဲကြဘူး။ နေစရာ ကျောင်းမရှိလို့ ရထားဘူတာမှာသွားအိပ်နေရရှာပါတယ်။ ရဲပတ္တရောင်နဲ့တိုးပါတယ် …။ ဘုန်းကြီးဖြစ်ကြောင်း ဒီနေ့မှထောင်ကထွက်လာကြောင်း နဲ့ ထောင်ထွက်လက်မှတ် ကိုပြပြီး ရှင်းပြပေမယ့် လက်မခံဘဲထောင်က ထွက်တဲ့နေ့မှာဘဲ ပြန်လည်အဖမ်းခံလိုက်ရပါတယ်။ တကယ့်ကိုဝမ်းနည်းစရာ ဗုဒ္ဓ ဘာသာနိုင်ငံဖြစ်နေပါပြီ။
န၀တ-နအဖလက်ထက်မှသည် ဦးသိန်းစိန်အစိုးရတက်လာတဲ့ ယနေ့အချိန်ထိ ဘာသာရေးဝန်ထမ်းတွေဖြစ်တဲ့ ရဟန်းသံဃာတော်တွေနဲ့ သီလရှင် တွေဟာ အဖိနှိပ်ခံနေရဆဲ၊ ဘာသာရေးအခွင့်အရေးတွေချိုးဖောက်ခံနေရဆဲ ဆုံးရှုံးေ နရဆဲပါ။ မတရားတာတွေမလုပ်ကြဘို့ မှန်မှန်ကန်ကန်လုပ်ကြဘို့ တရားဟောတဲ့ဆရာတော်တွရဲ့ တရားပွဲတွေလဲ အပိတ်ခံထားရပါတယ်။ နာဂစ်မုန်တို င်းကြောင့် ဘေးဒုက္ခရောက်နေသူတွေကို ကူညီပေးနေတဲ့ ဘုန်း တောကြီး အတော် များများလဲ စစ်အာဏာရှင်တွေရဲ့ အနှောင့်အယှက်ေ ပးမှုက မလွတ်ပါဘူး။
ယနေ့ မိမိတို့ဗုဒ္ဓဘာသာသာသနာအခြေအနေကိုပြန်ကြည့်ရင် အဖက်ဖက်က ချွတ်ခြုံကျနေတာကိုတွေ့ရမှာပါ။ သာသ နာတော် သန့်ရှင်းတည်တံ့ပြန့် ပွားရေးဆောင်ရွက်နေပါတယ်ဆိုတဲ့ သံဃာ့မဟာနာယကဆရာတော်များကလဲ သံဃာေ တွမတရားအဖိနှိပ်ခံနေရတာတွေကိုသိပါလျှက်နဲ့ မသိချင် ယောင် မမြင်ချင်ယော င်ဆောင်ပြီး နှာစေးေ တ်ာမူနေကြဆဲပါ။ ၂၀၀၇ ရွှေဝါရောင်အရေးအခင်းကာလတုန်းကလဲ စစ်အာဏာရှင်တွေက ဘုန်းကြီးအတု တွေလို့ပြောပြီး ဘုန်းကြီးေ ကျာင်းတွေကို စစ်တပ်က၀င်စီးတုန်းကလဲ တားမြစ်တော်မမူရှာဘူး။ ခပ်မဆိတ်နေတော်မူရှာပါတယ်။ စစ်အုပ်စုက သံဃာ ငယ်တွေကိုနှိပ်ကွပ်ဘို့ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေထုတ်ပြီးပြောခိုင်းတဲ့အခါမှာတော့ သံဃာ့မဟာနာယကဆိုသူတွေ ဟာ ရဟန်းဆိုတာ ဘာဓူရ ညာဓူရ လုပ်ရမယ်နဲ့ စစ်အာဏာရှင်တွေအလိုကျ ပြောတော်မူပါတယ်။ အဲဒီလို အဂတိတရားတွေလက်ကိုင်ထားနေတဲ့ သံဃာ့မဟာနာယကပါ။ အဲဒီ လိုပျက်စီးနေတဲ့အခြေအနေတွေကို သာသနာ စိတ်ရှိကြတဲ့ ဆရာတော်၊ သံဃာတော်တွေက အချိန်မီမပြုပြင်နိုင်ကြရင် မကာကွယ်နိုင်ကြရင်ဖြင့် ဗုဒ္ဓဘုရားသာသနာ ကွယ်ပျောက်ပြီး စစ်တပ်အလိုကျတည်ထောင်ထားတဲ့ စစ်တပ်သာသနာတော်ကြီးဖြစ်သွားတော့မှာဖြစ်ကြောင်း တင်ပြ လိုက်ရပါ တယ် …..။
Posted by oothandar on June 4, 2011 in Ashin Pyinna Nanda, Op-Ed